How to use time wisely (Part-1) ﻿
How to use time wisely (Part-1)
အချိန်ကို ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်မလဲ? (Part – 1)
သင့်အနေနဲ့အချိန်ဖြုန်းခြင်းအားရပ်တန့်လိုက်ပြီးနောက် ဘာမှစတင်မလုပ်ဆောင်ရသေးခင် သင့်အနေနဲ့ အချိန် ကို သင့်တော်တဲ့အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်နှင့် နည်းစနစ်များကို သင်ယူခြင်းဖြင့် အချိန်ကိုအမျှော်အမြင်ရှိရှိအသုံးချ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များဟာ အချိန်ကိုချွေတာစေပြီး သင့်ဘဝတိုးတက်ဖို့ရာအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အကူအညီပေးနိုင်မယ့်အချက်များဖြစ်သောကြောင့် အရေးကြီးပါသည်။
သင့်ထံတွင်ရှိသော အခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်များ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်မှာ မိမိကိုယ်ကိုသိရှိနားလည်ခြင်းပင်ဖြစ် ပါသည်။ သင့်ရဲ့လက်ရှိအားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များအား မိမိကိုယ်ကို သိရှိနားလည်ခြင်းမရှိပါက သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များကို အကဲဖြတ်ခြင်း၊ မြှင့်တင်ခြင်းတို့ မပြုလုပ်နိုင်တော့ပါ၊ ထိုအခါသင့်ရဲ့ဘဝကိုလဲ တိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုပြီးအရေးကြီးနိုင်တာတစ်ခုက သင့်အနေနဲ့ ဘယ်အ ရာကို အောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ချင်သလဲဆိုတာကိုမသိရှိသရွေ့သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိစေရန် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်များကို စီမံပြုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုဆောင်ထားကာ သင့်ရဲ့အတွေး အမြင်များ၊ အိမ်မက်များနှင့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို အစဉ်မပျက်ချရေးနေပါ။ သင့်ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကိုချရေးပါ။ သင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေလျော့နည်းလာစေရန် ဒါမှဟုတ် ထိုအရာများကို အားသာချက်များအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ရန်နှင့်သင့်ရဲ့အားသာချက်များကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အသုံး ချနိုင်မည်ကို အမြဲတွေးတောဆင်ခြင်နေပါ။
သင်ဘာကိုလိုချင်လဲဆိုတာ သင့်ကိုယ်သင်သိရှိပြီးပြီဆိုပါက သင်လိုချင်သောအရာများကို ခိုင်မာတဲ့ပန်းတိုင်များ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားရှိပါ။ သင်ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားချင်တယ်ဆိုတာကို သင့်အနေနဲ့ တိတိကျကျသိရှိပါက ထိုနေရာသို့ရောက်ရှိရန်အကောင်းဆုံးဘယ်လိုသွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုသင်နားလည်သဘောပေါက်စေဖို့ ပိုမိုလွယ် ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ထိုကဲ့သို့တိကျစွာသတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်များရှိခြင်းဟာ အကျိုးမဲ့သော ကွေ့ပတ်သွားရခြင်းများနဲ့ လမ်းလွဲခြင်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် သင့်ရဲ့အချိန်များကိုချွေတာနိုင်စေပါ သည်။ ဒီနေရာမှာ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့မှတ်စုစာအုပ်ဟာ အသုံးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်လက်ရှိအခြေအနေထိ ချရေးခဲ့ဖူးသောအရာများကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုပါ၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအားသတ်မှတ်ပါ။ သင်ဟာသင့်ရဲ့မှတ်စု စာအုပ်ပေါ်ကအိမ်မက်တွေအပေါ် ရိုးသားမှုရှိပါက သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်။
သင်ဘာကိုလိုချင်လဲဆိုတာ သင့်ကိုယ်သင်သိရှိပြီးနောက် သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များအား အစီအစဉ်တကျချမှတ်ပြီးပြီ ဆိုပါက နောက်တစ်ဆင့်မှာ ထိုပန်းတိုင်များအားရောက်ရှိစေဖို့ရာအတွက် မိမိကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးလုပ်ဆောင် လိုက်ပါ။ အဆုံးတွင်သင့်ကိုယ်သင်ထိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအားရရှိအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိ ဘူးဆိုပါလျှင် သင့်အနေနဲ့အဆိုပါအရာများရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှာလဲ?
သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုအကောင်းမြင်တဲ့ဖက်မှတွေးတောပါ။ သင့်ဘဝ ခရီးလမ်း၏အဆုံးတွင် သင့်အားစောင့်မျှော်နေမည့်ဆုလာဒ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ထားပါ၊ နောက်ပြီးတော့ သင့်ကိုယ် သင်ယုံကြည်မှုရှိဖို့ကိုလဲ မမေ့ပါနဲ့။
အပိုင်း (၂) နဲ့ (၃) ကို နောက်ရက်များတွင်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုအားပေးကြပါခင်ဗျာ